I-GStreamer 1.10.0 ngosizo lweVulkan API olutholakala kuWayland | Kusuka kuLinux
I-GStreamer 1.10.0 itholakala ngosizo lwe-Vulkan API eWayland
Manje isiyatholakala nge-download version 1.10 ye I-GStreamer, the uhlaka lwe-multimedia umthombo ovulekile manje osekelayo IVulkan API eWayland.
Ngale ndlela I-GStreamer iyaqhubeka neminyaka yayo engaphezu kwengu-15 yokuvuselelwa okuqhubekayo, okwenze ezimeni eziningi uhlaka oluzenzakalelayo lwe-multimedia ekusabalalisweni okuningi.
1 Yini iGStreamer?
2 Izici ze-GStreamer 1.10.0
3 Ungayilanda kanjani iGStreamer 1.10.0?
I-GStreamer Kuyinto a uhlaka lwe-multimedia yomthombo ovulekile, ukuthi ingaqhutshwa (I-GNU / Linux, i-Android, iWindows, i-Max OS X, i-iOS, iSolaris phakathi kwabanye), kubhalwe kwifayela le- C ulimi lokuhlela, usebenzisa i- Umtapo wolwazi we-GObject. Uhlelo lokusebenza lwalunenguqulo yalo yokuqala esemthethweni ngoJanuwari 2001 futhi kusukela lapho kuze kube manje lube nezibuyekezo ezinkulu.
El Uhlaka lwe-GStreamer vumela dala izinhlelo zokusebenza ezibukwayo okufana: nevidiyo, umsindo, ukufaka ikhodi, njll. Isibonelo, nge I-GStreamer ungadlala umculo noma wenze imisebenzi eyinkimbinkimbi njengokuxuba umsindo nevidiyo.
Umsebenzi oyinhloko we-GStreamer ukuhlinzeka ngohlaka lwama-plugins, ukuhamba kwedatha nokusingathwa / ukuxoxisana kwezinhlobo ezahlukahlukene zemidiya. Ibuye inikeze i-API yokubhala izicelo.
Lolu hlaka lwe-multimedia lungaxhunywa kwezinye izinhlaka ze-multimedia ukusebenzisa kabusha izinto ezikhona (isib. Ama-codec) nokusebenzisa izindlela zokufaka / zokukhipha kuzingxenyekazi ezahlukahlukene.
Izici ze-GStreamer 1.10.0
Ukuqaliswa kwe- ukusekelwa kwe-Vulkan API kuseva yokubonisa yeWayland.
Ukuthuthuka ku- I-OpenGL y I-OpenGL ES.
Inesistimu entsha yokuhlanganiswa yokuhlola esekwe ku- UMeson.
Ukufakwa kwe- i-GstStream API entsha evumela izinhlelo zokusebenza ukubuka okunengqondo ngesakhiwo sokugeleza nokusiza ukuphathwa kwamafomethi esitsha esiyinkimbinkimbi, futhi kusebenzisa izinto zokuhlola decodebin3 y playbin3.
Ukuthuthukiswa kwe-plugin I-VAAPI (i-Video Acceleration API).
Ukuhambisana ne- Bluetooth.
Ukuhambisana ne- I-RTP / RTSP.
Ukuhambisana ne- I-V4L2 (Video4Linux).
Ukuguqulwa komsindo nokukhanselwa kwe-echo.
Ukungeza amamojula amasha ama-gst-amadokhumenti (ngemibhalo) kanye izibonelo ze-gst (ngezibonelo zezicelo ezenziwe ku-GStreamer).
Inqubo yokufuduka kwe- imibhalo ngefomethi ye-Markdown, ukuze uvuselele ukunakekelwa nokuvuselelwa.
Ezinye izinto eziningi ezithuthukisiwe.
Ungayilanda kanjani iGStreamer 1.10.0?
Cishe wonke ama-distros anamaphakeji asemthethweni we-GStreamer ezinqolobaneni zawo, ngakho-ke kwanele ukuyifaka ngendlela ejwayelekile ye-distro ngayinye, ngendlela efanayo, singalanda inguqulo esemthethweni kusuka lapha.
Ukuphetha, Ngiyethemba wonke umuntu uyakujabulela lokhu kuthuthukiswa okusha futhi sibonga iqembu le-GStreamer ikakhulukazi ngokufakwa kweMarkdown kumadokhumenti abo, ngoba kuyinto ezokusiza kakhulu ekuvuseleleni okungapheli.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-GStreamer 1.10.0 itholakala ngosizo lwe-Vulkan API eWayland
Ungawakha kanjani umkhiqizo onesoftware yamahhala
Ungayisebenzisa kanjani iTumblr kusuka esigungwini ngeTeblr